Rikoodhadii laga diiwaan geliyey guushii ay Real Madrid ka gaartay Real Sociedad, kuna furtay horyaalka La Liga – Gool FM
Rikoodhadii laga diiwaan geliyey guushii ay Real Madrid ka gaartay Real Sociedad, kuna furtay horyaalka La Liga
Haaruun August 22, 2016
(Spain) 22 Agoosto 2016 – Real Madrid ayaa guul sahlan ku furatay horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub kaddib markii ay 3-0 uga taqalustay kooxda Real Sociedad oo ay marti u ahayd, Gareth Bale oo muujiyay inuu wadi karo kooxda xilli ay maqnaayeen Ronaldo iyo Benzima, qeybtii hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay 2-0.
74-ilbiriqsi oo qura ayay ku qaadatay Real Madrid inay dhaliso goolkeedii koowaad ee xilli ciyaareedka cusub.
Karooskii ugu horreeyay ay soo qaadaan ayaa noqday goolkoodii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka cusub, Daniel Carvajal ayaa dhinac ka keenay kubbada Gareth Bale ayaana madaxa la helay oo xitaa goolhayaha ma uu is dhaqaajin markuu shabaqa dhex dhigay.
Intaan la marin qeybta hore ee ciyaarta daqiiqadii 40-aad Real Madrid ayaa dhalisay goolkii labaad oo waliba ahaa mid aad u cajiib ah.
Xiddig yarahooda Marco Asensio ayaa maskax degan ku dhaliyay kubbad uu meel dheer kaga soo dhiibay Raphael Varane wuxuuna ka dul bootiyay goolhayaha Real Sociedad.
Gareth Bale ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee Real Madrid mar seeriga afka lagu hayay dhammaadka ciyaarta, wuxuu gadaal cararay daafacyada wuxuuna ku taabtay shabaqa oo bannaan.
Real Madrid ayaa guushan gaartay xilli ay ka maqnaayeen xiddigo muhiim u ah sida Ronaldo iyo Benzema laakiin kooxda Zidane ayaa muujisay inay heysato shax looga maarmi karo xiddigaha ka maqnaada.
MAN OF THE MATCH: Xiddiga ugu fiican kulankan waxaa loo aqoonsaday da’yarka Real Madrid ee Marco Asensio.
Haddaba halkaan hoose ka aqriso rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii ay Real Madrid guusha ku furtay horyaalka La Liga:-
>- Real Madrid ayaa hadda guul gaartay 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga, waana markoodii labaad ee ugu dheeraa taariikhda horyaalka.
>- Marco Asensio ayaa dhaliyey labo gool, labadiisii kulan ee ugu horreeyey Real Madrid, waxaana goolashaas uu ku dhaliyey kaliya saddex shuut bartilmaameed oo uu shabaqa ku tuuray.
>- Majiro ciyaaryahan ka madax dhalis badan tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Gareth Bale oo dhaliyey 10 gool oo madax ah tan iyo markaas.
>- Gareth Bale ayaa ku lug lahaa 80 gool tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Real Madrid sanadkii 2013-kii, waxaana uu tan iyo markaas dhaliyey 49 gool, isagoo caawiye ka ahaa 31 kale.
>- Gareth Bale ayaa dhaliyey saddex gool, saddex kulan oo uu kooxda Real Sociedad kula ciyaaray garoonka Anoeta.
LA LIGA: Rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii barbaraha ku idlaaday ee kooxaha Atletico Madrid iyo Alaves
DAAWO MUUQAALKA: Saddexleeydii ugu horreysay ee uu kooxda AC Milan u dhaliyey Carlos Bacca kulankii dhowaa ee Torino